Konke malunga nebhlog yeendaba ye-iPhone | IPhone iindaba
I-iPhone eyiyo yibhlog yeSpanish apho uya kufumana khona Olona lwazi lubalulekileyo lunxulumene ne-iPhone kunye nokusetyenziswa kwayo okanye imidlalo onokuyikhuphela kwiVenkile yeApple, ivenkile yayo yesicelo. Siza kupapasha yonke imihla Iindaba ngefowuni yeapile, iitutorials zokwenza jailbreak, vula i-iPhone okanye ufumane uninzi lwe-iOS. Sikulethela uhlalutyo kunye nokuphononongwa kwe Izixhobo ze-iPhone Apho uyakufumana khona iimeko, izitendi, izithethi, iichweba kunye nokunye okuninzi kwi-iPhone.
I-Podcast 12 × 37: Iifowuni zasekhaya eziqhotsiweyo kunye neengxaki zokunika ulwazi ngasese
I-12 × 34 I-Podcast: Uhlalutyo lwe-Keynote WWDC 2021
I-12 × 32 podcast: IPad Pro ifanelwe ngaphezulu
I-Twitter ibisoloko ibonakaliswa njengendlwane yeetrolls, kuba kulula kakhulu ukufihla ngasemva ...
Amahemuhemu amva nje athetha malunga nokuba iApple ilungiselela ikhonsoli yomdlalo. Ayizukuqala ngqa ...
Bonke abo babebukele iindaba zeApple kangangexesha elithile bevile malunga nokuba iApple ...
por ULuis Padilla yenzayo Iinyanga ze3 .
I-Wiseplay, onke amajelo ehlabathi kwiselfowuni yakho [TUTORIAL]
Ungamfumana njani umnini we-iPhone elahlekileyo okanye ebiweyo
Isifundo: Ungazi njani ukuba umntu uyakufumana 'Fumana Abahlobo bam'